Kooke Xabashi Lagu Soo Faraqay Somaliland, Si Loo Kiciyo Ganacsade Axmed Cismaan Geelle.
Wednesday December 25, 2019 - 11:37:28 in Articles by Hadhwanaag News
Waxaa baryan danbe lagu arkayay caasimadda Somaliand
iyo guud ahaan dalka meelo badan oo ka mid ah, sharaabka kooka koole oo ay ku xardhan tahay far xabashi. Kaasi oo aan hore loogu arag dalka loona qaatay in dib loo soo noolaynayo murankii u dheeeyay qoyska is mahadiyey ee reeer Cumar Geelle iyo Gnacsade Axmed Cismaan Geelle. Murankan oo ay bulshadu ka werheshay bilihii hore ee snadkan kadib markii waraaq loo soo dhibaya uu afhayeenka madaxtooyadu ka hor akhryay saxaafada. Isagaoo u akhriyay waraaqda si gawl gawl ah oo ay fulaynimoka muuqato, ntii aanu dhammayn akhriska warqada ayuu iska sii furay mikirifoonka yare e shaddhka u sudhnaa. Isagoo ka carayay in warbaahinta u hortooda ka akhriyay warqada loo shoo dhiibay ay suaalo ku boobaan. Sida ska cad muu se Biixi oo uu afhayeen u yahay ayaa yarkan u soo dhiibay waraaqda. Muuse laftisa ayaa farinta looga soo faray dalka yare e aynu jaarka nahay ee Jabuuti.
Ismaciil Cumar Geelle iyo Muuse biixi ayaa ah laba nin oo si ba’an skugu xidhan. Xidhidhkoodu Waxay uu i xasuusiyay heestii hadraawi ee la odhan jray Hal la qalay Raqdeeda eeku jirtay riwaayadii Tawaawac, hadii aan kazoo qabto tuduc oo u abwaanku odhanayo:
· Qarandidu libaaxay
· Ku qadhaabataayoo
· Soo qabo tiraahdaa.
Waxaan odhan karaa maanta waxa u dhigan qarindadaa Ismaaciil Cumar Geelle kuna qadhaabta ninka aynu madaxwaynaha u doornay ee Muuse Biixi Cabdi. Muuse waxa uu aad ugu hawlan yahay hawlo daba dhilifnimo oo ugu adeegayo cadow shisheeye kaasi oo ah Ismaaciil cumar Geelle oo dhanka kaale ku hawlam sidii uu maalin uun uga takhalusi lahaa Madaxbanaanidda Somaliland.
Waxba yaan qalinku ila taraarine aan u soo noqdo dulucda Maqaalka. Kooka Koolahan loo fasirtay inuu yahay mashruuc la doonayo in lagu kiciyo maalqabeen Axmed Cismaan Geelle oo ah nin ku dhac leh oo dalkiisoon weli helin aqoonsi caalamiya ku maalgashaday lacag kor u dhaaftay 20 Million oo doolarka Maraykan ah. Kana dheefaan dad badan oo ah shaqaale kala duwan oo ka hawl gala mashaariicda uu ku leeyahay deegaanka Jaleelo ee Duleedka Hargaysa, kuwaasi oo ay ka mid yihiin warshad wayn oo soo saarta Kooka koolaha oo ah ta ay isku dayeen Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadda Jabuuti oo adeegsanaysa Awood dawladeed inay baabiiso iyadoo u soo dhex maraysa Muuse Biixi iyo Maxamed Aw-Siciid, labadan oo aan ugu wanqalay labada Khaayin. Waxaad moodaa inay waa labada khaayine si dadban u baabiinayaan qaranimadda Somaliland iyagoo eeganaya danaha dhaqaale ee ka soo galaya dabadhilifnimada Ismaaciil Cumar Geelle. Waxaan si wayn u aaminsanahay in xulafadani yihiin ganacsadayaasha qarsoon ee soo waariday Kooka koola xabashigan. Kadib markii ay ku guuldaraysteen inay hab qafaalasho ah ku af-duubtaan ganacsade Axmed Cismaan Geelle horraantii Sanadkan. Tani waa khidad cusub oo la rabo in lagu mijo xaabiyo ganacsade Axmed. Hadaba waxa ay dad badani iswaydiinayaan ma u suurta gali doontaa in qorshahan cusub lagu naafeeyo ganacsiga Axmed? Waxaan si wayn u aminsanahay inaanu qorshahani wiiqi doonin ganacsiga Axmed Cismaan Geelle oo ah mid ay mahadiyeed dadka reer Somaliland, gaar ahaan inta uu dabka u hurriyo maalin kasta kuwaasi oo la hareero taagan duco, hiil & hoo aan kala go’ lahayn.
Waxaanan jecelahay inaan ku soo af-meero Maqaalka heestii Jaamac Riyo Eebbe ha u naxariisto e ee ay tuducyadeeda ka midka ahaayeen:
· Heegada dheereen ku saaray
· Dabayli ha kaa haftee
· Waxaad ku hagaagsanayd
· Hayaaydiyo qayladee
· Halkaagii nagana noqo
waxa ay tuducyadaasi ku socdaan saddexda khaayin ee siyaabo kala duwan oo ah digtaytarnimo iyo dhaqaale urursi isku kaashaday. In aydun halkiinii naga noqon doontaan maalin maalmaha ka mida ayaam rajaynaynaa sida uu saadaaliyay Jaamac Riyo Alle ha u naxariisto e`.
Qore: Cabdi Muhumed